Burmese, Tracts, ဝေစာ 07 -- ထာဝရဘုရားနှစ်သိမ့်တော်မူခြင်း | Waters of Life
Home -- Burmese -- Tracts -- Tract 07 (The LORD comforts you!)
This page in: -- Armenian -- BURMESE -- Chinese -- Dagbani? -- English -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean? -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- Thai? -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba
Previous Tract – Next Tract
ဝေစာ - ဖြန့်ဝေဖို့ရန် နုတ်ကပတ်တော်များ
ဝေစာအမှတ်စဉ်7-- ထာဝရဘုရားနှစ်သိမ့်တော်မူခြင်း
ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာ၊ မျက်ရည်များသည် မြစ်ကဲ့သို့ အတိုင်းအတာဖြစ်သည်ကို သတိထားမိလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် အကြီးကျယ်စိတ်ပျက်မှုနှင့် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ပြီး ရူးသွပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် မှောင်မိုက်သော အလယ်၌ ကျွန်တော်တို့ကို နှစ်သိမ့်ကူညီပေးသည်။ “အမိသည်သားငယ်ကို နှစ်သိမ့်စေသကဲ့သို့၊ သင်တို့ကို ငါနှစ်သိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၆၆း၁၃)။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် မိခင်တစ်ဦးရဲ့မေတ္တာနှင့် သူ၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ကရုဏာတော်ကို သင်္ကေတဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာနားလည်လိုသော သူသည် မိခင်တစ်ဦးက သူ့ကလေးတွေကို ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ပြီး ချစ်တတ်သော မေတ္တာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ထာဝရဘုရား၏ မေတ္တာတော်ကို နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
မိခင်တစ်ဦးသည် သူ၏ဝမ်း၌ ကလေးကို သယ်ဆောင်ပြီး နာကျင်မှုနဲ့အတူ ကလေးကို မွေးဖွား ပေးခြင်းကြောင့် သူမ၏ကလေးများသည် မိမိကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ မိခင်သည် သူတို့ အဘို့ တာဝန်ရှိခံစားရသူ၊ သူတို့ကို ချောင်းမြောင်းကာ နေ့ညဉ့်ဂရုစိုက်ရတယ်။ သူတို့ ဆာလောင် မွတ်သိပ် သောအခါ နို့တိုက်ရတယ်၊ သူတို့ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ်၊ သူတို့ပျော်အောင် လုပ်ပေးရတယ်၊ သူတို့တွေက စကားနားမထောင်သော်လည်း သူတို့အား ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သူမသည် တစ်ဦးတည်း ကလေးများအရွယ် ဘယ်တော့မှ ဒီအတိုင်းမထားဘူး၊ သူတို့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်သောကြောင့် သူတို့အဘို့ ဆုတောင်းကာ ဘုရားလက်ထဲအပ်နှံတယ်။ မိခင်တစ်ဦးသည် သူမ၏ကလေးများကို ကြင်နာမှုနှင့် ချစ်ခြင်း ပြည့်ဝစွာနဲ့ စောင့်ထိန်းတယ်။
သူမ၏ ကလေးများ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ကလေးများအတွက် အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်၊ အဝတ်လျှော်၊ ချက်ပြုတ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ထိုသူတို့အဘို့ သန့်ရှင်းရေးများနှင့် စာတတ်စေရန် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်သော ကျောင်းကိုရွေးချယ်ပေးပါတယ်။ သူတို့ကျောင်းကပြန်လာသောအခါမှာလည်း ၎င်းတို့၏အိမ်စာ နှင့်အတူ သူတို့ကို ကူညီသွန်သင်ပေးတယ်။ ကလေးများသည် အပြစ်၊ မကောင်းသောအရာလုပ်မိလျှင် သူတို့ ကို ဆုံးမကာ သမာဓိရှိစွာနဲ့ ကြီးပြင်းလာဖို့ရန် မျှော်လင့်တယ်။ သူမသည် ကလေးများအဖို့ ကောင်းသော မိတ်ဆွေများကို ရှာတွေ့ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ မိခင်သည် ကလေးများအဘို့ အကောင်းဆုံးသော ပုံသက်သေပါပဲ။
ကလေးများ အများ၏ကြားမှ အိမ်ပြန်လာသည်ကို သိတယ်။ ကလေးများသည် မိခင်ရှေ့မှာ အပြစ် များကို ဝန်ခံကာ မိခင်သည် သူတို့အပြစ်များကို စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဖွတ်ထားပေးတယ်။ မိခင်သည် သူမ၏ ကလေးများကို စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းကို သွန်သင်ကာ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့် ပက်သက်သော ပုံပြင်များပြောပြပါတယ်။ သူမသည် မပင်ပန်းသလို အမြဲမေတ္တာပြခဲ့တယ်။
မိခင်တစ်ဦး၏ မေတ္တာ၊ သနားခြင်းကရုဏာစိတ်၊ သူမ၏သည်းခံခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်နှင့် နှစ်သိမ့်ခြင်း သင်္ကေတကို ဖော်ပြတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင် ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်လာသောသူအပေါင်းတို့အဘို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝ၏။ ထာဝရဘုရားက “သင်တို့ကို နှစ်သိမ့်စေသောသူကား၊ အခြားသူမဟုတ်၊ ငါကိုယ်တိုင်ပေတည်း” ဟု (ဟေရှာယ ၅၁း၁၂) မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ကအနန္တတန်ခိုးရှင် ကူညီခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ဖို့ ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ အသက်တာမှာ ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေလား၊ မိမိတစ်ယောက်တည်း ချုပ်တည်းမထားနဲ့။ ဘုရားသခင်ကို ဖော်ပြပါ။ သင်ယုံကြည်သလောက် သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြင်တွေ့မှာဖြစ်တယ်။
ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို အသက်၊ အစွမ်း၊ သတ္တိ၊ စိတ်၊ အလိုတော်၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ခနာကိုယ်နှင့် ဝိညာဉ်ကို အပ်ပေးထားတယ်။ ကျွန်တော်မရွေ့တတ်သော ကျောက်တုံးများ၊ နားမကြား တတ်သောအရုပ်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခံစားတတ်သော နှလုံးသား၊ စိတ်နှင့် အသိစိတ်များကို ပေးထားတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ အားသာချက်ကို စုံလင်စွာ နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် လမ်းဖြောင့်ကို ပြင်ဆင်သော ကောင်းသောအကျင့်တရားလမ်းထဲတွင် လျှောက်ဖို့ အလိုရှိတယ်(ဧဖက်၂း၁၀)။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ မိဘများတတ်နိုင်သမျှထက် အကောင်းဆုံးကို မြင်တတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးဆန္ဒ အပြည့်အဝရှိသောသူ ဖြစ်တယ်။
သူသည် စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပြစ်တင်မှု၊ ရှုပ်ထွေးမှုများနဲ့ တစ်ဦးတည်းထားကာ စွန့်မခွာပါပဲနှင့် ကရုဏာနဲ့ ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်း သင်ပေးသောသူပါ။ (မဿဲ ၆း၁၁) မှာ “အသက်မွေးလောက်သောအစာကို အကျွန်ုပ် တို့အား ယနေ့ပေးသနားတော်မူပါ” လို့ သင်ကြားပေးတယ်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ ပညာရေး တံခါးကို ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကို မေ့လျော့မထားပါနဲ့။ သူသည် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် စာတန်၏ လှည့်စားခြင်းနှင့် အကြံအစည်များကနေ ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။
အပြစ်ဒုစရိုက် ပျက်စီးခြင်းအကြောင်း ဘုရားသခင်၏ တရားသဖြင့် စီရင်ခြင်း လိုအပ်တယ်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် တခါတည်းနဲ့ တရားမစီရင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို ထိုတရားစီရင်ခြင်းမှ ကယ်နုတ်မယ့် ခရစ်တော်ကို စေလွတ်တော်မူတယ်။ လောကသားများ အပြစ်အားလုံးကို ဖြေလွတ်တဲ့ယေရှုကို နောင်တနှင့် သူ့ထံသို့ လာပါရန် ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ “အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်း တို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရမည် အကြောင်းတည်း။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ်တော်မူ၏” (ယောဟန် ၃:၁၅-၁၆)။
မိခင်တစ်ဦးသည် သူ၏ သားသမီးများ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သန့်ရှင်းပေးသလို ဘုရားသခင်သည်လည်း အသစ်သောအသက်တာကဲ့သို့ သန့်ရှင်းစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓာတ်အကျဆုံးသောအချိန်၌ပင် ကျွန်တော်တိုု့ကို ကူညီမစပေးချင်တယ်။ သူ့ထံသို့ နောင်တစိတ်နဲ့လာရင် ကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကို လွတ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ကြံနေသောဘုရားပါ။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ ပြန်လာသည်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ စောင့်ကြိုနေတယ်။ မည်သည့်အချိန်အခါမှာ ကိ်ုယ်တော်ကို ကျေးဇုူးတင်ကာ ပြန်လှည့်လာမည်နည်း၊ မိမိနှလုံးသားမှာရှိသော အရာအားလုံးကို တင်ပြပါ။ သူ၏ကောင်းသောအလိုတော်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းပါ။ သူသည် ရင်ဘတ်ကို ဆန့်လျက် ကြိုဆိုနေတယ်။
သူသည် ကျွန်တော်တို့ကို သားဦးအရာကလေး အပြစ်ချမှတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားတယ်။ သူသည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်တို့ရဲ့ သေတတ်သော ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ သူ့ထာဝရအသက်ထည့်သွင်းရန် အလိုရှိတယ်။ ကိုယ်တော့်ထံတော်သို့ လာခဲ့ပါ။ ဂတိတော်အတိုင်း ကိုယ်တော်ကို ရှာတွေ့ပါလိမ့်မည်။ “ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့် ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်” လို့ (ယေရမိ ၂၉း၁၃) မှာ ဖော်ပြထားတယ်။
“စိတ်မသာ ညည်းတွားသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ပြည်တော် ကို အမွေခံရကြလတံ့”(မဿဲ ၅း၄)။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်အဝနဲ့ ခရစ်တော်သည် ကျွန်တော်တို့ ဆိုးညစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ သူသည် ထိန်းသူမရှိဘဲ ပစ်ထားသော သိုးများကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့ လူသားများကို သနားတယ် (မဿဲ ၉း၃၆)။ ယေရှုသည် သူ့ရဲ့ အစေကိုခံဖို့ရန်အတွက် တပည့်မွေးထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူသည်တပည့်တော်များကို ပုံသက်သေအဖြစ်နေကာ ညင်ညင်သာသာနဲ့ လမ်းပြတော်မူ၏။ သူသည် တပည့်တော်များကို ပုံသက်သေအဖြစ်နေကာ ညင်ညင်သာသာနဲ့ လမ်းပြတော်မူ၏။ တပည့်တော်ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့သည် ခရစ်တော်ကို လက်မခံသည်ကိုမြင်လျှင် ကောင်းကင်မှ သူတို့ထံ မီးကျစေဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ယေရှုက “ထိုသူတို့ကို ကယ်တင်အံ့သောငှါ ကြွလာသည်ဟု ဆုံးမတော်မူ၏” (လုကာ ၉း၅၅)။
တပည့်တော် ပေတရုသည် ယေရှုကို ငြင်းပယ်သောအခါ ပေတရုသည် ပြင်းစွာ ငိုကြွေးလေ၏။ သို့သော် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ယေရှုသည် သူ့ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး သခင်ဘုရား၏ အစေခံရန် နောက်တဖန် သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်နှစ်သိမ့်တော်မူ၏။
ယုဒ သစ္စာဖောက်အနမ်းနဲ့ သခင်ကို ရန်သူများ လက်သို့ အပ်နှံသောအခါ ယေရှုသည် သူ့ကို မကျိန်ဆဲဘဲနဲ့ “ယုဒ သင်သည် နမ်းခြင်းကိုပြုလျက် လူသားကိုအပ်သလောဟု မေးတော်မူ၏”(လုကာ ၂၂း၄၈; မဿဲ ၂၆း၅၀)။ ယေရှုသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော ခမည်းတော် ဘုရားကဲ့သို့ သနားတော်မူ၏ (လုကာ ၆း၃၆)။ သူ အနာရောဂါငြိမ်းပေးခြင်း၊ ဆင်းရဲဖျားနာများပေါ်ထားရှိသော မေတ္တာ သည်လည်း အထောက်အထားဖြစ်ကြသည်။
မြို့ထဲပေးဝင်ခွင့်မရှိ နူနာရောဂါစွဲကပ်သော(၁၀)ယောက်သည် အဝေးမှ ယေရှုလာသည်ကိုမြင်လျှင် အော်ဟစ်၍ သူတို့အား အနာငြိမ်းဖို့ တောင်းလျှောက်သောအခါ သူတို့သူ့စကားအခွင့်အာဏာအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ နူနာရောဂါငြိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ နတ်ဆိုးစွဲကပ်သောသူနဲ့ ဆုံသောအခါ နတ်ဆိုးများ အော်ဟစ်ကြ၏။ ယေရှုသည် သူတို့ထံမှ ထွက်မပြေးဘဲနှင့် နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ကာ လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။
သူက မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်ကို အသုံးပြုကာ လူပေါင်းငါးထောင်ကျော် ဆာလောင်မွတ်သိပ်တာကို ကျွေးမွေးတယ်။ သူသည် ခေါင်မိုးပေါ်မှ တဆင့်ရှေ့တော်၌ လျှောချခံခဲ့ရသော လေဖြတ်ယောကျာ်း ၏အပြစ်များကို ခွင့်လွတ်တယ်။ ယေရှုက သေလွန်သော လာဇရု၏အမကို ခွန်အားပေးသည်မှာ “သင်သည် ယုံလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်” လို့ (ယောဟန် ၁၁း၄၀) မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ယေရှုသည် လူသားအားလုံး ရန်သူများပင်လျှင် ချစ်တယ်။ ပရောဖက်ဟေရှာယ ယခင်က ပရောဖက် ပြုခဲ့သကဲ့သို့ ယေရှုသည် လူများ၏အပြစ်များကို သိတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မကယ်တင်နိုင်ကြောင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့် သူကိုယ်တိုင် ဒီအပြစ်ကို ထမ်းဆောင်တာဖြစ်တယ်။ “သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏။ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍ နှိမ့်ချ တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း ခံရသောသူဖြစ်သည်ဟု ငါတို့သည် ထင်မှတ်ကြပြီ။ ထိုသူသည် ငါတို့ လွန်ကျူးခြင်း အပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာ ထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ ငြိမ်သက်ခြင်း ချမ်းသာကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ ရောက်၍၊ သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့ အသီးအသီး လိုက်သွား ကြသည် ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၄-၆)။
ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့ကို ရွေးနုတ်ပြီး ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာ ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကို သက်သေ တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ နှစ်သိမ့်ခြင်းကို ရရှိစေတယ်။
ခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်သောသူတိုင်းသည် ဝိညာဉ်တော်၏ မစခြင်းကို ရရှိကာဖြစ်တယ်။ ယေရှုသည် သူ၏ တပည့်တော်များကို ဂတိပေးသောအရာက “ဝိညာဉ်တော် ဥပဇ္ဈယ်ဆရာ သည် ရောက်လာလျှင် ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်း၊ အပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်း၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်း လောကီသား တို့အား ထင်ရှားစွာဘော်ပြမည်။ သူသည် ငါ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ငါနှင့် စပ်ဆိုင်သော အရာကိုယူ၍ သင်တို့အား ဖော်ပြလိမ့်မည်”(ယောဟန် ၁၄း၁၆-၂၆; ၁၅း၂၆-၂၇; ၁၆း၇-၁၄)။ ဘုရားသခင်သည် ဆုတောင်းသောသူတို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတော်မူ၏(လုကာ ၁၁း၁၃)။ အချိန်တိုင်းမှာ ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည် ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းကို တမန်တော်ပေါလုသက်သေခံခြင်းမှာ “ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏” (ရောမ ၈း၁၄)။
ကျွန်တော်တို့ မိုက်မဲစွာနေတဲ့အချိန်၊ စိတ်ပျက် ကျရှုံးအားငယ်သောအချိန်တွေမှာ ဝိညာဉ်တော်သည် မစကူညီပေးသည်။ သူကျွန်တော်တို့အား အန္တရာယ်ပြုခြင်းမှ အာမခံပေးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးသည်။ သေခြင်း၏ချုပ်နှောင်မှုမှ ကျွန်တော်တို့ကို လွတ်ပေးပါတယ်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းတယ်။ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်၌ ကျွန်တော်တို့အတွက် ရပ်တည်ကာ အပြစ်ဝန်ခံ ပေးကာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းဆီသို့ ကျွန်တော်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
၀ိညာဉ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိကာ မစသောသူပါ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုဆုတောင်း သည်မှာ “သနားခြင်းကရုဏာ၏အဘ၊ သက်သာခြင်း အမျိုးမျိုးတို့၏ အရှင်တည်းဟူသော ငါတို့သခင် ယေရှု ခရစ်၏ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူး တော်အားဖြင့် ကိ်ုယ်တိုင်သက်သာခြင်းရှိသကဲ့သို့၊ ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကို ခံရသောသူတို့အား သက်သာ စေနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့၌ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား သက်သာစေတော်မူ၏” (၂ကော ၁း၃-၄)။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် လျင်မြန်စွာ ကျွန်တော်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ချက်ချင်းမပြောင်းလဲစေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသားကို ရှေးဦးစွာ ကယ်တင်ပေးကာ ပြောင်းလဲပေး တယ်။ သူ့ဧဝံဂေလိတရား၏ ကျမ်းပိုဒ်မှတဆင့် ကျွန်တော်တို့ကို သူ၏ကျေးဇူးတရား၏ တန်ခိုးကိုပေးတော်မူ၏။ ခရစ်တော်၏ စကားနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီး စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အညီ လိုက်လျှောက်သောသူသည် မင်္ဂလာ များနှင့် ပျော်ရွင်သူတစ်ဦး ဖြစ်မည်ကြောင်းကို ဂတိပေးပါတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပို၍သိရှိလိုပါသလား ချစ်သောမိတ်ဆွေ?
ဘုရားသခင်၏ နှစ်သိမ့်မှုကို ခံစားရပြီလား ချစ်သောမိတ်ဆွေ? သင်သည် ဝိညာဉ်တော်၏ အဖြစ်မှန် အကြောင်းကို ပိုမိုသိလိုလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် အခမဲ့နှင့် ပို့ပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ မိတ်ဆွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်ကာ ဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ခြင်း အပြည့်အဝရရှိရန် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Page last modified on September 18, 2018, at 10:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)